कसरी आउट भए केयूको उपकुलपतिको दौडबाट माकाजु ? - Media Chok
कसरी आउट भए केयूको उपकुलपतिको दौडबाट माकाजु ?
२०७७ माघ ९, शुक्रबार मा प्रकाशित १ महिना अघि
काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा बुधबार बिहानसम्म तेस्रो पटकका लागि रामकण्ठ माकाजु नियुक्त हुँदैछन् भन्ने चर्चा थियो । माकाजु मात्र होइन, सर्च कमिटीका सदस्य पनि विश्वासमा थिए, कुलपति अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नियुक्त गर्छन् भनेर ।
शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र विश्वविद्यालयका ट्रस्टी दमनाथ ढुंगाना पनि माकाजुकै पक्षमा थिए भने पूर्व उपकुलपति सुरेशरा शर्मा यसै भन्ने गरी खुलेका थिएनन् । त्यसैले सर्च कमिटीले तीन जनामध्ये पहिलो नम्बरमा माकाजुको नाममा सिफारिस गरेकोे थियो ।
तर, माकाजुको विपक्षका ओलीनिकट केही नेता र प्राध्यापकहरू लविङमा जोडिएपछि उपकुलपतिमा भोला थापाको पल्लाभारी भएको हो । स्रोतका अनुसार माकाजुलाई रोक्न काभ्रेका नेकपा नेता पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटादेखि संविधानविद् विपीन अधिकारीसम्मको लविङ थियो । बाँस्कोटा माकाजुसँग मात्र होइन, काठमाडौं विश्वविद्यालसँगै असन्तुष्ट छन् । अधिकारी भने माकाजुसँग रिसाएर गत वर्ष काठमाडौं विश्वविद्यालय छोडेका थिए ।
प्राध्यापक हुन खोजेका अधिकारीलाई माकाजुले रोकेपछि उनीहरूबीच सम्बन्ध बिग्रिएको थियो । ०७५ को भदौको कार्यकारी परिषद्का बैठकमा रजिस्टार भोला थापाले अधिकारीको पक्षमा एजेण्डा राखेका थिए, तर माकाजुले रोकेका थिए ।
त्यसपछि विश्वविद्यालय छोडेका अधिकारी माकाजुको विपक्षमा थिए । अहिले माकाजुलाई रोक्न अधिकारीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि प्रधानमन्त्री ओलीसम्मलाई राजी बनाउन पहल गरेको विश्वविद्यालय स्रोतको दाबी छ । अधिकारीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर माकाजुलाई रोक्न पहल गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री सचिवालयका विष्णु रिमाल र सूर्य थापा पनि माकाजुको विपक्ष उभिएका थिए । अधिकारी र बाँस्कोटामार्फत लविङ बढाएका थापाले प्रधानमन्त्री सचिवालयलाई हात लिइसकेका थिए । त्यति हुँदा पनि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ र विश्वविद्यालयका ट्रस्टी ढुंगाना भने माकाजुको पक्षमा थिए ।
यहीबीचमा काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्राध्यापक संघ पनि माकाजुको विरोधमा उभिएको थियो । माकाजुको नाम उपकुलपतिका लागि सिफारिस भएपछि संगठनले विज्ञप्ति निकालेर माकाजुलाई नियुक्त नगर्न भनेको थियो । संघका सभापति विवेक बराल कांग्रेसनिकट हुन भने महासचिव विकास अधिकारी पूर्वमाओवादी खेमाका हुन् ।
उपकुलपति माकाजुले संघका गतिविधिमा नियन्त्रण गर्न खोजेका थिए । त्यसको संकेतचाहिँ सभापति बराललाई टीटीईको डाइरेक्टरबाट हटार गरेका थिए । माकाजुले संघका सभापति बराललाई टीटीईको डाइरेक्टर नियुक्त गरेका थिए तर अपेक्षित परिणाम नआएको भन्दै बराललाई हटाएपछि उनीहरू झन् असन्तुष्ट थिए ।
को हुन उपकुलपतिमा नियुक्त भएका थापा ?
काठमाडौं विश्वविद्यालयमा नयाँ उपकुलपतिमा भोला थापा नियुक्त भएका छन् । तेस्रो पटक उपकुलपतिका लागि प्रतिस्पर्धामा रहेका रामकण्ठ माकाजूलाई पछि पार्दै थापा उपकुलपति नियुक्त भएका हुन् ।
माकाजूकै निरन्तरता हुने धेरैको अनुमानलाई चिर्दै विश्वविद्यालयमा नयाँ उपकुलपति भएका थापाले विश्वविद्यालयमा दुई दशक बिताइसकेका छन् ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि आवद्ध थापा मेकानिकल इन्जिनियर हुन् । थापाले सन् १९९४ बाट काठमाडौं विश्वविद्यालयमा सेवा सुरु गरेका थिए ।
थापाले २००४ मा नर्वेबाट मेकानिकल इन्जिनियरिङमा पीएचडी गरेका हुन् । उनी काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ इन्जिनियरिङको हेड अफ डिपार्टमेन्ट, डीन र रजिस्ट्रार भइसकेका थिए ।
अघिल्लो पटक पनि उपकुलपतिका लागि प्रतिस्पर्धामा रहेका थापा रजिस्ट्रार थिए । तर, पछिल्लो पटक उपकुलपति रामकण्ठ माकाजूसँग विवाद बढेपछि ७ भदौ ०७५ मा राजीनामा दिएका थिए ।
राजनीतिक पृष्ठभूमिको हिसाबले थापा कांग्रेसनिकट मानिन्छन् । माकाजूको सम्बन्ध पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नारायणकाजी श्रेष्ठसँग निकट देखिन्थ्यो ।
काठमाडौं विश्वविद्यालको स्कुल अफ एजुकेसनमा लामो समय काम गरेका मनप्रसाद वाग्लेचाहिँ रामकण्ठ माकाजूलाई कार्यशैलीका हिसाबले पनि निरन्तरता दिन नहुने अवस्था थियो, ठीकै भएको ठान्छन् ।
थापा-माकाजू तिक्त सम्बन्ध
७ भदौ २०७५ मा भोला थापाले काठमाडौं विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रारबाट राजीनामा दिए । त्यसको महिना दिनमा उपकुलपति रामकण्ठ माकाजूले रजिस्ट्रारमा स्कूल अफ साइन्सका डीन सुवोध शर्मालाई नियुक्त गरे । त्यतिबेला थापाको राजीनामा सहज स्थितिमा भएको होइन र शर्माको नियुक्ति पनि विवादरहित भएन । अर्थात्, थापाले उपकुलपति माकाजूमाथि गम्भीर आरोप लगाएर सहकार्य तोडेका थिए ।
राजीनामा दिँदै गर्दा थापाले भनेका थिए, ‘माकाजूले एनजीओजस्तो गरी विश्वविद्यालय चलाए । विश्वविद्यालय स्वेच्छाचारी र निरंकुश ढंगले सञ्चालन गरे ।’
यी दुई आरोप जति गम्भीर थिए, त्यसको बेवास्ता गर्दै माकाजूले थापासँगको सम्बन्ध त तोडे नै वरिष्ठता मिचेर शर्मालाई रजिस्ट्रारमा नियुक्त गरे, जसको विरोध प्राध्यापक संघले विज्ञप्ति निकालेर नै गर्‍यो ।
अर्थात, माकाजू र थापाको बीचमा सहकार्यको सुरु दिनदेखि नै विवाद थियो । थापाले माकाजूको कार्यशैलीको पटकपटक आलोचना गरिरहेका थिए । त्यही क्रममा भदौ २०७५ मा काठमाडौं विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्को बैठक बसिरहेको थियो । त्यस बैठकमा नौवटा एजेण्डा थिए । तर, एउटा भन्दा बढ्तामा दुईबीच सहमति नै जुटेन ।
लामो समयदेखि नियुक्त हुन नसकेका डीन, सहायक डीन, एसोसिएट परीक्षा नियन्त्रक, हेड अफ डिपार्टमेन्टबाहेक करिब २२ वटा पदाधिकरी नियुक्तिको एजेण्डा परिषद्‌मा थियो । त्यो बैठकमा माकाजूले आफू एक्लैले गर्ने प्रस्ताव गरेको भन्दै थापा असहमत भए ।
त्यही बैठकमा विपीन अधिकारी प्रकरण पनि चर्कियो । अधिकारीलाई प्राध्यापक हुन नदिन माकाजूले भूमिका खेलेको भन्दै आलोचना बढेको थियो र उनले विश्वविद्यालय छोड्ने निर्णय लिएका थिए ।अधिकारीबाहेक मनप्रसाद वाग्लेले पनि माकाजूकै कारण विश्वविद्यालय छोडेका थिए । त्यस्ता लामो सूची छ, जो माकाजूका कारण विश्वविद्यालयबाट बाहिरिएका छन् ।
अघिल्लो पटक माकाजूको कार्यकाल सकिएलगत्तै झण्डै ४५ दिन कार्यबाहक उपकुलपतिको जिम्मेवारीमा थिए, थापा । रजिस्ट्रार भएका कारण स्वतः कार्यबाहक भएका थापासँग माकाजूको खास सम्बन्ध त्यहीँबाट बिग्रिन थालेको हो ।
त्यसबाहेक माकाजू र थापाबीच काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई समुदाय र प्रदेशअन्तर्गत राख्ने कि संघअन्तर्गत भन्नेमा पनि विवाद थियो । विवादकै कारण पछिल्लो कार्यकालको छोटो समयमै उनीहरूबीच तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रह्यो ।
प्राध्यापकहरूको सिफारिसमै विरोध
काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघले उपकुलपतिका लागि सिफारिश नामप्रति नै विरोध गरेको थियो । संघले दुई कार्यकाल पूरा गरेका व्यक्तिलाई मापदण्डविपरीत उपकुलपतिका लागि नाम सिफारिश गरेको भन्दै विरोध गरेको थियो ।
अध्यक्ष विवेक बराल र महासचिव विकास अधिकारीले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर उनीहरूलाई कुन मापदण्डअनुसार सिफारिस गरियो भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपमै प्रष्ट पारिदिन सिफारिस समितिसँग माग गरेका थिए ।
उनीहरूको प्रश्न थियो, ‘सार्वजनिक रूपमा आवेदन माग भएपछि ४० भन्दा बढी उम्मेदवारहरूले आवेदन दिएको र तीमध्ये सिफारिस गरिएका नामहरू के कति कारणले कुन मापदण्डअनुसार सिफारिस गरिए भन्ने सार्वजनिक चासोको विषय भएकाले सार्वजनिक रुपमै प्रष्ट पारिदिन सिफारिस समितिसमक्ष जोडदार माग गर्दछौँ ।’
शिलापत्रडटकमको सहयोगमा तयार पारिएको समाचार ।